Fanaan Kaynaan oo caro ka qaaday mid ka mid ah musharaxiinta Mareykanka oo… – SBC
Fanaan Kaynaan oo caro ka qaaday mid ka mid ah musharaxiinta Mareykanka oo…
Fanaanka caanka ah ee Soomaaliyeed Keynaan Cabdi Warsame ayaa si aad ah uga carooday fal uu ku kacay mid ka mid musharaxiinta u tartamaysa jagada madaxweynenimada Mareykanka ee doorashooyinka soo socda, kaasi oo fasax la’aan heesta Waving Flag ee uu qaado Fanaan Keynaan u adeegsadey olalihiisa dhanka doorashada.
Carada iyo qaylo dhaanta ka soo yeertey Fanaan Keynaan ayaa timid ka dib markii musharaxa xisbiga Jamhuuriga Mitt Romney oo khubad ka jeedinayey gobolka Florida oo uu guul ka gaarey loolanka cida u tartamaysa xisbiga Jamhuuriga goobtii uu khudbada ka jeedinayey laga shiday heesta “Wavin’ Flag” ee Fanaan Keynaan ka qaaday furitaankii ciyaarihii koobka aduunka ee 2010-kii lagu qabtey wadanka South Africa.
Warsaxaadeed uu soo saarey Keynaan Cabdi Warsame ayuu wuxuu ku sheegay in Romney fasax la’aan ugu adeegsadey olalihiisa dhanka doorashada heestiisa, isagoo ku caga jugleeyey in uu arintaasi ka qaadan doono go’aan dhanka sharciga oo uu la tiigsado Romney.
Mr Romney ayaa sheegay in heestaasi ay ku jirtey diiwaanka heesaha ay adeegsanayeen kooxda u qaabilsan olalahiisa, balse dib dambe aan loo isticmaali doonin.
Laakiin arinta la yaabka leh ee uu ku dhaqaaqay Fanaan Keynaan ayaa aheyd isagoo ku sheegay warsaxaafadeedkiisa in heestaasi uu fasax u haysto Madaxweyne Barack Obama in uu adeegsado loolankiisa dhanka doorashada oo aanu uga baahnyn in uu fasax soo waydiisto.
Kaynaan Gar buu u Leyahay in u Dacwad ku soo Oogoh Musharaxa Hestiisa Bililiqaystay. Obama waa istahilaa in Kalsoni buuxdah ka Heloh Fanankaas Qaaliga ah iyo Somalida Kaleba.
Maya Waxa obama Oo Aan IsTicmaalin HeesTa
Loogu Fasaxey Musharaxan Cadaanka aH Na
Loogu Diidey So Midib Takoor Maahan Aan
Cadaanka Ku Dhaqmin
k,naan waa fanaan somaliyed oo damiir fiican leh says:
thnks k,naan iska celi kuwa u malaynaya wax walba inay ku helayan ogolansho la’aan adaa xor u ah heeshaga cidaad dontid sii , walal waxan jecla inad tirahdidi only somalia ba iska leh heestan waan kugu aqaan somali jaceeylka noolow sxb k,naanow
kkk F-Torres Hadaanu Somali Nahay Cunsirinimada Anaga Caadi bay nootahay oo Somalidu Abtiris bay ku Dhaqantaa ilaa 80 Oday iyo Wixi ka badan Dorashada wakhtigi uu Obama Tartanka ugu Jiray in u Majara u Qabtoh USA Somalidu aad bay ugu dubatay in Riyada Obama surtogal notoh Abtiriska Mashaqada logadhigay Somalida Xataa in u Qaby ku Leyahay Obama waa suurto gal.